Akụkọ - Ebee ka valvụ nru ububa dị?
Site na ngwa
Nnu acid alkali
Ọgwụgwọ mmiri nsị
Site na ihe anụ ahụ
Nchara a kpụrụ akpụ
Ngwakọta nke Monel
Ihe pụrụ iche
Site na njikọ
ịgbado ọkụ butt
ịgbado ọkụ anya
Site na nrụgide
Nnukwu valvụ 6.4 ~ 80MPa
Oghere nrụgide dị ala ≤1.6MPa
Valvụ mgbali ọkara 2.5 ~ 4.0MPa
Nnukwu mgbali elu ≥100MPa
Valvụ agụụ <0.1MPa
Site na ngwaahịa
Valve ọnụ ụzọ ámá
Pipe & Ngwa
Onye na -ese ihe
Site temp nke mediuml
Nkịtị -40 ~ 120 ° C
oke okpomọkụ 450 ~ 600 ° C
obere okpomọkụ -150 ~ -40 ° C
ọkara-okpomọkụ 120 ~ 450 ° C
Oke oke okpomọkụ> 600 ° C
ultra -low okpomọkụ <-150 ° C
Ebe valvụ urukurubụba dị?
Oghere nru ububa dabara adaba maka pipeline na-ebufe usoro mgbasa ozi mmiri na-emebi emebi na nke na-anaghị emebi emebi na sistemụ injinịa dị ka igwe na-emepụta ọkụ, gas kol, gas sitere n'okike, ikuku oyi na ikuku na-ekpo ọkụ, na-agbaze kemịkalụ na ike ike na nchedo gburugburu ebe obibi, a na-ejikwa ya maka nhazi na nkwụsị. eruba nke na -ajụ ase.
Oghere nru ububa adabara maka usoro iwu. Ebe ọ bụ na nrụgide nke valvụ urukurubụba na pipeline buru ibu, ọ bụ ihe dị ka okpukpu atọ nke valvụ ọnụ ụzọ ámá. Ya mere, mgbe ị na -ahọrọ valvụ urukurubụba, ekwesịrị ịtụle mmetụta mbibi nrụgide nke sistemụ pipeline, yana ike nke efere urukurubụba iji guzogide nrụgide nke onye na -ebugharị pipeline kwesịrị ịtụle ya mgbe emechiri ya. Tụkwasị na nke a, ọ dị mkpa ịtụle njedebe nke oke ọkụ nke ihe oche oche na -agbanwe agbanwe nwere ike iguzogide na oke okpomọkụ.
Ogologo nhazi na ịdị elu nke valvụ nru ububa dị obere, ọsọ mmeghe na mmechi bụ ngwa ngwa, yana nwee njiri mara njikwa mmiri. Ụkpụrụ nhazi nke valvụ nke urukurubụba kacha dabara adaba maka ime valvụ ndị nwere dayameta. Mgbe achọrọ valvụ urukurubụba iji chịkwaa ọwa mmiri, ihe kacha mkpa bụ ịhọrọ nha na ụdị valvụ nru ububa ka ọ rụọ ọrụ nke ọma na n'ụzọ dị irè.
Na mkpokọta, n'ịgbagharị, na -achịkwa njikwa na apịtị, a chọrọ ka ihe owuwu ahụ dị mkpụmkpụ yana ọsọ mmeghe na mmechi ngwa ngwa. Maka mbelata nrụgide dị ala, a na-atụ aro valvụ nru ububa.
N'ihe banyere ngbanwe ọnọdụ abụọ, ụzọ wara wara, mkpọtụ dị ala, cavitation na vaporization, ntakịrị mwepu na ikuku, na mgbasa ozi abrasive, enwere ike iji valvụ nru ububa.
Mgbe ị na -eji valvụ nru ububa n'okpuru ọnọdụ pụrụ iche dị ka ngbanwe mkpọtụ, akara siri ike ma ọ bụ akwa siri ike, obere okpomọkụ yana ọnọdụ ọrụ ndị ọzọ, ihe pụrụ iche maka eccentric atọ ma ọ bụ eccentric okpukpu abụọ nwere akara ọla edoziri nke ọma na ngwaọrụ mmezi chọrọ.
Oghere nru ububa etiti dị mma maka mmiri dị mma, nsị mmiri, mmiri n'oké osimiri, mmiri nnu, uzuoku, gas sitere n'okike, nri, ọgwụ, mmanụ na ọnọdụ dị iche iche, dịka mgbapu ule gas efu, ihe ndị dị elu chọrọ ndụ, yana ọnọdụ okpomọkụ nke -10 ~ 150 ℃, Acid-base na pipeline ndị ọzọ chọrọ akara zuru oke.
Valvụ urukurubụba eccentric nke dị nro dabara adaba maka imeghe na imechi ụzọ abụọ na imezi ikuku na ikuku ọkpọ. A na -ejikarị ya eme ihe na pipeline gas na ụzọ mmiri na igwe igwe, ụlọ ọrụ ọkụ, ike eletrik, na sistemụ mmanụ ọkụ.
Ogwe ọla nchara nwere okpukpu abụọ dị mma maka ikpo ọkụ obodo, uzuoku, mmiri na gas, mmanụ, acid na pipeline alkali, dị ka ngwaọrụ na-achịkwa ma na-egbochi ihe.
Na mgbakwunye na a na-eji ya dị ka valvụ njikwa ihe nrụpụta gas nke PSA, a na-ejikwa valvụ nchara na-arụ ọrụ nke ọma na mmanụ mmanụ, petrochemical, chemical, metallurgical, ike eletriki. na ngalaba ndị ọzọ. Ọ bụ ezigbo nhọrọ maka valvụ ọnụ ụzọ, valvụ nkwụsị, wdg.
Oge ezipụ: Jul-12-2021
Mkpado na -ekpo ọkụ, Ngwaahịa na -ekpo ọkụ, Map saịtị
Igwe anaghị agba nchara Gate Gate valvụ, Igwe anaghị agba nchara bọl valvụ, Akuku Globe Valve, Valve Gate Gate, Valve Gate Valve, Ogwe bọọlụ Trunnion,